မြန်မာနိုင်ငံကို သူ့တို့ဆန္ဒအလျှောက် ပြန်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၄၀၀ လောက်ရှိပြီလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးက ကြာသပတေးနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်က ရိုဟင်ဂျာတွေ ဌာနေပြန်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေ မအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်တွေကတော့ ဒီပြောကြားချက်ကို အတည်မပြုသေးပါဘူး။
မြန်မာသံရုံး ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ပုံနဲ့တကွတင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး သူ့သဘောနဲ့သူ နောက်ထပ် ပြန်လာတဲ့ ၄၆ ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံက နွေးနွေးထွေးထွေး လက်ခံခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ပြန်လာသူစုစုပေါင်း ၃၉၇ ယောက်ရှိပြီလို့ပြောပေမယ့် သူတို့ ပြန်လာတဲ့ အချိန်တွေကိုတော့ အတိအကျ ပြောမထားပါဘူး။
ဒီလိုမြန်မာသံရုံးရဲ့ ကြေညာချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်နာမင်းကြီးကရော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး A.K. Abdul Momen ကပါ ချက်ချင်း တစုံတရာမှတ်ချက်ပေး ပြောကြားတာမျိုးမရှိပဲ သေချာအောင် လုပ်ရဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်လို့ AFP သတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ ဒုက္ခသည် လက်တဆုပ်စာလောက် ပြန်တာဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ အခြေနေတွေ တိုးတက်မှုရှိလာပြီလို့ မပြောနိုင်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေက လုံခြုံရေးနဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်အတွက် အာမခံမရင် မပြန်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုနေတာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်တွေက ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာနဲ့ စခန်းပတ်လည် သံဆူးကြိုးတွေ ကာရံမယ်လို့ စီစဉ်လာတာ အပြင် လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေ ကန့်ကွက်နေတဲ့ ကြားကပဲ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲက ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ကျွန်းကို ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို လက်မခံတဲ့ မြန်မာအစိုးရကတော့ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လက်ခံရေးအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအာဏာပိုင်တွေနဲ့ရော ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပါ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုက်ခသညျ ၄၀၀ မွနျမာပွညျပွနျသှားတာ ဘင်ျဂလားမသိ
မွနျမာနိုငျငံကို သူ့တို့ဆန်ဒအလြှောကျ ပွနျလာတဲ့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျ ၄၀၀ လောကျရှိပွီလို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ ဆိုငျရာ မွနျမာသံရုံးက ကွာသပတေးနမှေ့ာ ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရငျက ရိုဟငျဂြာတှေ ဌာနပွေနျရေး ကွိုးပမျးမှုတှေ မအောငျမွငျခဲ့တာကွောငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အာဏာပိုငျတှကေတော့ ဒီပွောကွားခကျြကို အတညျမပွုသေးပါဘူး။
မွနျမာသံရုံး ဖစျေ့ဘုတျမှာ ပုံနဲ့တကှတငျထားတာ ဖွဈပွီး သူ့သဘောနဲ့သူ နောကျထပျ ပွနျလာတဲ့ ၄၆ ဦးကို မွနျမာနိုငျငံက နှေးနှေးထှေးထှေး လကျခံခဲ့ကွောငျးဖျေါပွထားပါတယျ။ ပွနျလာသူစုစုပေါငျး ၃၉၇ ယောကျရှိပွီလို့ပွောပမေယျ့ သူတို့ ပွနျလာတဲ့ အခြိနျတှကေိုတော့ အတိအကြ ပွောမထားပါဘူး။
ဒီလိုမွနျမာသံရုံးရဲ့ ကွညောခကျြနဲ့ ပတျသကျလို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ ဒုက်ခသညျဆိုငျရာ ကျောမရှငျနာမငျးကွီးကရော နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး A.K. Abdul Momen ကပါ ခကျြခငျြး တစုံတရာမှတျခကျြပေး ပွောကွားတာမြိုးမရှိပဲ သခြောအောငျ လုပျရဦးမှာ ဖွဈကွောငျးပွောတယျလို့ AFP သတငျးက ဖျေါပွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ထုတျပွနျခကျြမှာတော့ ဒုက်ခသညျ လကျတဆုပျစာလောကျ ပွနျတာဟာ ရခိုငျပွညျနယျထဲမှာ အခွနေတှေေ တိုးတကျမှုရှိလာပွီလို့ မပွောနိုငျကွောငျး ဖျေါပွထားပါတယျ။
ရိုဟငျဂြာခေါငျးဆောငျတှကေ လုံခွုံရေးနဲ့ နိုငျငံသား ဖွဈခှငျ့အတှကျ အာမခံမရငျ မပွနျဘူးလို့ ငွငျးဆိုနတောပါ။ နောကျပိုငျးမှာ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အာဏာပိုငျတှကေ ဒုက်ခသညျ စခနျးတှမှော အငျတာနကျဖွတျတောကျတာနဲ့ စခနျးပတျလညျ သံဆူးကွိုးတှေ ကာရံမယျလို့ စီစဉျလာတာ အပွငျ လူ့အခှငျ့ရေးအဖှဲ့တှေ ကနျ့ကှကျနတေဲ့ ကွားကပဲ ထောငျနဲ့ခြီတဲ့ ဒုက်ခသညျတှကေို ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောထဲက ဝေးလံခေါငျသီတဲ့ ကြှနျးကို ပွောငျးရှပေ့ေးဖို့ လုပျနတော ဖွဈပါတယျ။
ရိုဟငျဂြာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို လကျမခံတဲ့ မွနျမာအစိုးရကတော့ ဒုက်ခသညျတှကေို ပွနျလကျခံရေးအတှကျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အာဏာပိုငျတှနေဲ့ရော ကုလသမဂ်ဂနဲ့ပါ လကျတှဲ လုပျဆောငျနတော ဖွဈပါတယျ။